Nezve - Nantong Global Packaging Zvigadzirwa Co, Ltd.
Kubva 2000, Nantong Global Packaging Zvigadzirwa Co, Ltd. ndeimwe yevanogadzira makuru ekuzora uye emishonga kurongedza iri muHaimen Nantong, Dunhu reJiangsu, China. Isu tinopa akasiyana siyana akajairwa egirazi zvigadzirwa zvekushongedza zvivakwa kuti vatengi vakwanise kuita kwavo vega mapakeji.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira pefiyumu mabhodhoro egirazi, mabhodhoro ezvembambo, okisijeni pefiyumu atomizer, mabhodhoro akakosha emafuta, mabhodhoro egirazi, magirazi epurasitiki, makepu ealuminium, mapampu, mabhodhoro epurasitiki nemhando dzakasiyana siyana dzechikafu nemabhodhoro echinwiwa.
Tine mavhiri mashanu uye gumi nemashanu mitsara yekugadzira, kuburitsa zuva nezuva zvinopfuura mamirioni 1.5 zvidimbu. Tinogona kugadzira yako yega pasuru, kusanganisira yakavanzika-chakuvhuvhu kugona, iine akanakisa zvivakwa zviripo zvesilika-kuongorora, sirivheri kana goridhe inopisa kutsikisa, kupenda kwemavara, acid kugadzirwa, chinamirwa, kupisa kupisa, etc. Tinokupa iwe itsva uye dzakasiyana nzira dzekusangana nekupakata kwako uye nekupa zvinetswa nemaitiro akagadzirwa. Yedu dhizaini timu ine hunyanzvi kubvunza iyo chaiyo mibvunzo uye kuratidza yakanakisa mhinduro inodiwa kune ako wega mapakeji dhizaini nemakwikwi mutengo. Isu tinobata mutemo we "mhando yekutanga" kugutsa vatengi 'akawanda anodikanwa. Strick mhando yekutarisa system inogona kupihwa. Mune rimwe shoko, tinopa imwechete-yekumira sevhisi kune vatengi
Isu tinopinda akawanda akasiyana erunako fair gore rega, seBeautyworld muDubai, Cosmoprof Las Vegas, Intercharm Runako Fair muRussia, Cosmoprof Asia muHK, Viet Runako muVietnam zvichingodaro. Kubva pamitambo iyi, tinosangana neshamwari dzakawanda uye tinorega vatengi vakawanda votiziva.
Seimwe yevatengesi vakakura vekupakata nehunyanzvi vane hunyanzvi mundima iyi muChina, isu tatoendesa zvinhu zvedu kune nyika dzinopfuura makumi mashanu pasirese, sePakistan, Russia, Poland, Argentina, Vietnam, Malaysia, USA, UK, Greece, Switzerland ... Chiitiko chakareba mundima iyi uye yepamusoro chikamu chemhando yakatungamira kambani yedu kune mukurumbira wepasirese wepasirese.
Runako Nyika Dubai Runako Ratidza
Asia Pacific Runako Ratidza
Runako Ratidza muLas Vegas
HBA Runako Ratidza
Intercharm Russian Runako Ratidza
Iran Runako & Yakachena